कञ्चनपुर : बालिका निर्मला पन्तका हत्यारालाई कारबाही मागसहित प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोलीबाट मारिएका किशोर सन्नी खुनालााई अन्तिम विदाइ गरिएको छ । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रह्मदेवस्थित महाकाली किनारमा राष्ट्रिय झण्डा ओढाएर सन्नी खुनाको अन्त्येष्ठि गरिएको हो । सन्नी खुनाको अन्त्येष्ठि अघि सात नम्बर प्रदेश सभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचेतक सांसद तारा लामा तामाङले राष्ट्रिय झण्डा ओढाएर विदाइ
अाखिर किन पक्ष र बिपक्षमा छ बर्ष छ प्रधानमन्त्री सँगको डा के सी को लडाइ यस्तो छ
चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग राख्दै प्रा.डा. गोविन्द केसीले आमरण अनशन सुरु गरेको २०७५ असार २१ गते ६ वर्ष पूरा भएको छ। यो अवधिमा केसीले ६ प्रधानमन्त्रीको सामना गरे। केसीका तीन अनशन झेलेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निधन भइसकेको छ। अन्य पाँच प्रधानमन्त्री केसीको पन्ध्रौं अनशनका साक्षी छन्। पहिलो र दोस्रो अनशन झेलेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई
चौतर्फी आलोचना पछि प्रचण्डले मागे प्रधानमन्त्री ओलीको राजिनामा ! यस्तो छ ओलीको तयारी
काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षा विधेयकका कारण सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको छ । चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस गरेसँगै सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो । सत्तारुढ दल निकट चार भातृ संगठनद्वारा मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरणको माग, डा. गोविन्द केसीको विगत २३ दिनदेखिको जारी सत्याग्रह, केसीको समर्थनमा सदन अवरोध, सडक आन्दोलन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित विभिन्न दलद्वारा केसीको मागमा सरकारविरुद्ध समर्थन,
‘मार्सी’ बारे प्रधानमन्त्री – ‘खाना खाएपछि फेसबुकमा फोटो हाल्नु गलत हो?’
काठमाडौं : व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँकहाँ खाना खाएको विषयमा अत्यधिक चर्चा भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि त्यसबारे मुख खोलेका छन्। उनले प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारको आलोचना गर्न केही विषय नपाएपछि ‘मार्सीको विज्ञापन गरेको’ आरोप लगाए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिर्तामोडस्थित बि एन्ड सी अस्पतालक सञ्चालक दुर्गा प्रसाईँसँग एउटै टेबलमा बसेर खाना
आपत्तिजनक टिप्पणीले गयो कानुन मन्त्री तामाङको पद
काठमाडौं : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिने भएका छन्। बंगलादेशमा पढ्ने नेपाली विद्यार्थीहरूबारे आपत्तिजनक अभिव्यक्तिका कारण आलोचित भएका मन्त्री तामाङलाई सोमबार बेलुका बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले पद त्याग्न निर्देशन दिएको थियो। सचिवालय बैठकको निर्देशनअनुसार तामाङले दिउसो २ बजे पत्रकार सम्मेलन गरी पद त्याग्न लागेको सरकार तथा नेकपा सम्बद्ध स्रोतहरूले जनाएका छन्।